Oromo TV : Irreechaa Massacre & Its Commemoration – By Prof. Mohammed, Dr. Tafarii and obbo Asnaaqaa Irkoo
August 30, 2017 in Oromia
LABSA KORA SABAA 4ffaa ADDA BILISUMMAA OROMOO (Oromo Liberation Front) — Addi Bilisummaa Oromoo Kora Sabaa 4ffaa bakka hirmaattotni bakka bu’oota miseensota ABO, bakka bu’oota Caayaalee ABO, bakka bu’ootnii fi hoogganootni murnoota hawaasaa adda addaa, deggertootni Dhaabichaa, akkasumas, beektotnii fi ogeeyyiin gara garaa addunyaa mara irraa walitti dhufuudhaan argamanitti Hagayya 20 – 30, 2017tti geggeeffatee […]
Remembering Victims of the October 2, 2016 Irreecha Massacre in Bishoftu Commemoration Event – Washington, DC October 1, 2017 http://machatulama.net Board members of the Macha and Tulama Association have been asked by the Oromia Support Group (OSG) to organize a commemoration of the victims of the October 2, 2016 Irreecha Massacre. Macha and Tulama Baord […]
ONN: Oduu Idilee Olmaa Oromiyaa fi Oduu gara garaa – Hagayya 30, 2017
#BilisummaaOromoo– Kun dhaamsa #XumuraGabrummaa ti. “Ummati Oromoo waan rakkoo bu’uraa hiiku irratti xiyyeeffachuu qaba. Ganamaa galgala waanuma diinni hojjatu, duukaa bu’ee iyyuun jijjirama bu’uraa fiduu hin dnada’u. Waanti murteessaan qabsoo #XumuraGabrumamaamilkeessuuf kutannoo fi murannoon hojjachuu dha. Kana booda yeroon, horiin, beekumsi, ogummaa fi qabeenyi qisaasamu jiraachuu hin qabu. Qabsoo keenya gulantaa guddaa gahe kanatti xumuraa gochuuf harka walqabannee […]